ओलीले लिए संसदबाट विश्वासको मत,विपक्षमा ६० मत - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
ओलीले लिए संसदबाट विश्वासको मत,विपक्षमा ६० मत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत जितेका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतवार बसेको बैठकमा भएको मतविभाजनमा ओलीको पक्षमा २ सय ८ सांसदले मतदान गरे । विपक्षमा ६० मत परेको छ । कुल २७५ मध्ये २६८ सांसदले मतदानमा भाग लिएका थिए ।
कांग्रेसबाहेकका सबै सांसदले ओलीको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । संसदमा कांग्रेसका ६३ सांसद छन् । ओलीको पक्षमा नेकपा एमालेका १ सय २१, माओवादी केन्द्रका ५३, राजपाका १६ र फोरमका १६ सांसद तथा अन्य साना दलका स्वतन्त्र सांसदले मतदान गरे । कैलाली १ बाट निर्वाचित राजपा सांसद रेशम चौधरी पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् भने नयाँ शक्तिका डा। बाबुराम भट्टराई देशबाहिर रहेकाले बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्नका मात्र प्रधानमन्त्री बनेको नभइ देशको विकासका लागि प्रधानमन्त्री बनेको बताएका थिए । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले फागुन ३ गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
अमेरिकामा प्रचण्डलाई ‘नो ईन्भेष्टीकेसन सर्कुलर’ जारी, के हो नो ईन्भेष्टीकेसन सर्कुलर ?
काठमाडौं । अमेरिका भ्रमणमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री एंव नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डका लागि […]
काठमाडौं । सरकारसंग ११ बुँदे सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा आएको सिके राउतको पार्टी (स्वतन्त्र मधेस […]
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका महत्वपूर्ण निकायहरु आफूमातहत राखेर शक्ति सञ्चयतर्फ लागेका […]
नेकपाका शीर्ष नेतृत्वबीच दाउपेच
काठमाडौं । अध्यक्ष र सचिवहरूको सूची टुंग्याएर जिल्ला एकीकरणलाई पूर्णता दिने तयारी अन्ततः नेपाल कम्युनिस्ट […]
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न नेकपा (विप्लव) समूहप्रति ‘चनाखो’ भएर सुरक्षा […]
लामो समयको रस्साकस्सीपछि नेकपा जिल्ला नेतृत्व तय, पूर्व एमालेबाट र माओवादी कति ?
काठमाडौं । लामो समयको रस्साकस्सीपछि नेकपाले जिल्ला नेतृत्वको प्रस्ताव तयार गरेको छ । पार्टी एकीकरण भएको १० […]
पब्जी खेल्दा एक युवकको मृत्यु,किन बढीरहेको विश्वमा क्रेज ? यसरी भएको थियो सुरु
थाइल्यान्डमा मतदान सम्पन्न, ८० प्रतिशत मतदान
‘गाई कि त्रिशुल खेलेर ल्याएको गणतन्त्र होेईन्,राजतन्त्र-राजतन्त्र भनेर धेरै फट्याकफुटुक नगर्दा हुन्छ’
अष्ट्रेलियामा नयाँ नीति: क्षेत्रीय विश्वविद्यालय रोज्नेलाई छात्रवृत्ति,अध्ययनपछि वर्किङ भिसा
रोजगार संयोजकका लागि १० हजारको आवेदन, कुन प्रदेशबाट कति ?